Madda Walaabuu Press: Hidhattoonni ABO Aanaa Gidaamii Keessatti Konkolaatota Raayyaa Ittisaa Lama Mancaasanii Loltoota Keessa Turan Fixan, Jedhu Jiraattonni. Aaangawoonnis Mirkaneessanii Jiru
Akka jiraattonni Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanitti, jeneraalota waraanaa lama fi qondaala tika nagaa tokko dabalee – loltoota 18 tu konkolaatota sana keessa ture. Konkolaatota lameen keessaa tokko battaluma ka gubate yoo tahu kaan immoo hallayyaa seenee caccabe. Loltoonni keessa turan martinuu ni dhuman. Aangawoonni mootummaa, hidhattootaan haleellaan konkolaatota raayyaa ittisaa motummaa lama irratti geggeessamuu fi konkolaatota lameen miidhuu isaa mirkaneessanii jiran.
Aangawoota mootummaa, magaalaa Dambi Dolloo jiran keessaa, nageenya isaaniif yaaddoo qaban irraa kan ka’e akka maqaan isaanii hin himamne nu gaafatan tokko akka jedhanitti, loltooonni Waraana Bilisummaa Oromoo halellaa sana geggeessuunii fi konkolaatonni lameen manca’uun, akkasumas, loltoonni du’uun mirkana. Sabaabaa kanaan raayyaan ittisaa, namoota nannoo kudhan ta’an qabee gara Dambi-doollootti geessee jira, loltoota hedduus gara Gidaamii fi naannawa ishee, akka Garjeedhaafaatti bobbaasee uummata dararaa jira – jedhu – aangawaan kun. Bulchaa aanaa Gidaamii – Obbo Gammadaa Milkiyaasittis, konkolaatonni raayyaa ittisaa lama hidhattootaan haleelamuu fi miidhamuu dubbatanii jiran.